War-bixin – Guddigee ugu xilsaaran wakiillada Puntland arurinta xogaha la xiriira xeerarka aan hirgelin ama aan sidoodii loogu dhaqmin? – Kalfadhi
Golaha wakiillada ee Puntland waxay ka kooban 10 guddi oo midkiiba ay ku jiraan lix ilaa toddobo xubnood oo ka tirsan baarlamanka, sida aan ku sheegnay warbixino hore aan uga qornay guddiyadaas. Guddi walba wuxuu golaha ugu xilsaaran yahay hawl-gaar ah.
Masuuliyadda guud ee golaha wakiillada ayaa ah metelaad, korjoogtayn iyo la xisaabtan. Guddiyadda ayaana leh masuuliyadda korjoogtaynta iyo la xisaabtanka, xilka xildhibaanadu ay ka siman yihiin metelaadda. Waxay war-bixinno ka keenaan hay’adaha xukuumadda iyo kuwa kale ee ay kor-joogtaynta ku leeyihiin.
War-bixintan waxaan ku eegaynaa guddiga shuruucda iyo caddaaladda ee golaha wakiillada, waa guddi soo jiray mudadii goluhu jiray. Waxaana madax ka soo noqday xildhibaano kala duwan oo golaha soo maray.
Xildhibaan Cabdiqani Axmed Surato oo ka mid ah wakiillada cusub ee baarlamanka ku soo biiray jannaayo 2019 lagana soo doorto gobolka Nugaal ayaa bishii febraayo goluhu u magcaabay guddoomiyaha guddigan, sida uu qorayo xeer-hoosaadka golaha wakiiladu.
Xildhibaan Cabdiqani waa mudane da’yar.
Hawlaha shaqo ee guddiga shuruucda iyo caddaallada;
Ilaalinta Dastuurka, Xeerarka dalka iyo go’aamada Goluhu ansixiyo.
Hubinta in xeerarkii Goluhu ansixiyey lagu soo saaray faafinta rasmiga ah.
Ururinta Xogaha la xiriira xeerarka aan hirgelin ama aan sidoodii loogu dhaqmin.
Soo jeedinta ciddii Jebisa Dastuurka iyo xeerarka Dalka.
Soo jeedinta wax ka bedelka xeerarkii Goluhu horey u ansixiyey oo u baahan in wax laga bedelo.
Dhiiri galinta Arrimaha cadaaladda iyo Garsoorka.
Ka warbixinta xaaladaha maxaabiista iyo xabsiyada Dalka.
Fududeynta xeerarka golaha la horkeeno.
Xaqiijinta la dagaalanka anshax xumada iyo Mukhaadaraadka.
Ka talo bixinta wax ka bedelka dastuurka Dowladda Puntland iyo soo jeedinta is-waafajinta kan Federaalka.
U soo gudbinta Golaha wakiillada wixii warbixin ah ee la xiriira Shuruucda iyo Cadaaladda.
Guddigani wuxuu masuuliyadihiisa gutaa inta ay furan yihiin labada kalfadhi ah ee goluhu yeesho sanadkii, kuwaas oo midkiiba socdo 45 cisho waxayna furmaan bilaha Juun iyo Oktobar ee sanad walba.
Golaha wakiillada Puntland ayaa hadda ku jira fasaxoodii caadiga ahaa waxayna kalfadhiga ku soo noqon doonaan bisha badhtamaha Juun. Mudada fasaxa lagu jiro ayaa guddiga joogtada ahi hawlaha golaha sii wadaa.